I-gearbox ye-gear ephantsi e-china, i-gearbox i-gearbox china manufacturer, i-worm backlash worm china china, i-china backback worm ukunciphisa i-china, i-china i-angle gear gear, i-servo izicelo ze-china, i-china i-gearbox ye-gearbox ye-gear, i-china gear gear reducer china
U ku t h u s u n a u s a lo b a s o b a a s a b a lo b i i: L d d.
Inombolo yomnxeba: + 86-571-88220652 / 53 Ifeksi: + 86-571-88220651 I-imeyile: [imeyile ikhuselwe]
Ukubuyela umva okuphantsi kwicala elifanelekileyo leservo sokunciphisa umbungu
Ukuchaneka okuphezulu kwezixhobo zombungu yindawo efanelekileyo yokuchaneka kwebhokisi yezixhobo yeplanethi, umenzi wezixhobo unokuzinciphisa kakhulu iindleko zokusebenzisa ibhokisi yeebhokisi zeeplanethi ezichanekileyo
Isisombululo esifanelekileyo somyili kukujikeleza iidigri ezingama-90 ukufaka iinkqubo ze-servo motor drive
I-shaft shaft kuthotho inokuqhutywa yimoto enye ukufezekisa imveliso ehambelana nevili ezininzi zentshulube. Isetyenziselwe ukucoca ngokuzenzekelayo iqokobhe lefowuni kunye nezinye izixhobo
Iimpawu zokubuyela umva ezisezantsi:
-Izixhobo zokubuyela umva kwi-Worm gear zinokuhlengahlengiswa ziye ngaphantsi kwe-1 arc.
-Ukunciphisa kunokulungiswa kwakhona umsantsa emva kokusebenzisa.
Igalelo ngokudibanisa: inokuthenjwa ngaphandle kokubuyela umva.
-Isiphumo esenziwe ngokudibanisa ukuhlangana kwemisesane yokubopha: inokuthenjwa ngaphandle kokubuyela umva.
Isindululo sokujikeleza ngokuchanekileyo
-Ukunciphisa ingxolo kunye nokushukuma okubangelwa kukutshintsha komthwalo kunye notshintsho lwamandla okusika.
-Ukunciphisa ingxolo kunye nefuthe elibangelwa kukukhula kunye nokubuyela umva.
- Ngokunciphisa ukubamba kweentshulube.
-Ukonyusa isantya sokuphendula kwempethu.
Isixhobo sokujonga ngokuchanekileyo
-Umatshini we-CNC, umgca wendibano, umatshini wokusika, imigca yokuhambisa, njl.
-Isalathiso sesixhobo, indlela yokufunda echanekileyo ifuna amaxesha okuhamba ngokuchanekileyo.
Isantya sokutshintsha kweemeko
-Ukunciphisa ingxolo kunye nefuthe elibangelwa kukutshintsha kwesantya.
-Ukunciphisa ukubamba kweentshulube okubangelwa kukutshintsha kwesantya.
Ujikelezo Low Yenza ukhetho:
Ezi zihloko zilandelayo ziqulathe ulwazi malunga nezinto eziyimfuneko ekukhetheni nasekusebenziseni ngokuchanekileyo ibhokisi yebhokisi.
Ukufumana idatha ethile kwibhokisi yebhokisi yegiya, jonga izahluko ezifanelekileyo.
1, ikaliwe torque yemveliso
I-torque enokuhanjiswa ngokuqhubekekayo nge-shaft yemveliso, kunye neyunithi yegiya eqhutywa phantsi kwento yenkonzo fs = 1.
2, torque efunekayo
Imfuno yetorque esekwe kwimfuno yesicelo. Kuyacetyiswa ukuba ulingane okanye ungaphantsi kwetorque ye-Mn2 ibhokisi yegiya ephantsi kophononongo ikaliwe.
3, torque ebaliweyo
Ixabiso le-torque yokubala eliza kusetyenziswa xa ukhetha ibhokisi yebhokisi. Kubalwa kuthathelwa ingqalelo i-torque efunekayo Mr2 kunye nenkonzo ye-fs, ngokobudlelwane apha emva:
1, ulinganiso lwamandla egalelo
Ipharamitha inokufumaneka kwiitshathi zokulinganiswa kwebhokisi yebhokisi kwaye imele i-KW enokuhanjiswa ngokukhuselekileyo kwibhokisi yebhokisi, ngokusekwe kwisantya sokufaka n1 kunye nenkonzo yefs = 1.
2, ulinganisele imveliso amandla
Eli xabiso ngamandla ahanjiswayo kwimveliso yebhokisi yegiya. inokubalwa ngezi fomyula zilandelayo:
Ukusebenza ngokufezekileyo yiparameter enefuthe elikhulu kubungakanani bezicelo ezithile, kwaye ngokusisiseko ixhomekeke kulwakhiwo lwezixhobo zezibini.
Itheyibhile yedatha ekwiphepha 9 ibonisa ukusebenza ngokukuko (n1 = 1400) kunye namaxabiso okusebenza kwe-static.
Khumbula ukuba la maxabiso afezekiswa kuphela emva kokuba iyunithi iqhubekile kwaye ikubushushu obusebenzayo.
1, ukusebenza Dynamic
Ukusebenza okunamandla lulwalamano lwamandla akhutshwayo kwisiphumo seshafti P2 kumandla asetyenzisiweyo kwigalelo shaft P1:
2, ukusebenza Static
Ukusebenza ngokukuko ekufumaneni ukuqala kwebhokisi. Nangona oku kungabalulekanga kangako kwigiya zokuhamba, kunokuba yinto ebaluleke kakhulu xa ukhetha iigmotors ezisebenza phantsi komsebenzi ophakathi.
ICANDELO LENKONZO [fs]
Inqaku lenkonzo (fs) lixhomekeke kwimeko yokusebenza ibhokisi yegiye iphantsi kweeparameter ekufuneka zithathelwe ingqalelo ekukhetheni eyona nto ifanelekileyo yeenkonzo ezibandakanya:
1. Uhlobo lomthwalo womatshini osebenzayo: A - B - C
2. ubude bexesha lokusebenza lemihla ngemihla: iiyure / usuku (△)
3.ubuninzi besiqalo: qala / iyure (*)
B - umothuko ophakathi, fa≤3
C - izothuso ezinzima, fa≤10
-Je (kgm2) umzuzu we-inertia yangaphandle uncitshisiwe kwi-shaft drive
-Jm (kgm2) umzuzu we-inertia yeemoto
-Ukuba fa> 10 nceda unxibelelane neNkonzo yethu yobuGcisa
A I-feeder -Screw yezinto zokukhanya, iifeni, imigca yokuhlangana, iibhanti zokuhambisa izinto zokukhanya, iixube ezincinci, iilifti, oomatshini bokucoca, iifilitha, oomatshini bokulawula.
B Izixhobo -Winding, esebenza ngomatshini esebenza ngomatshini abaxhasi, iilifti zempahla, iibhalansi, oomatshini bokufaka umsonto, abaxubeki abaphakathi, iibhanti zokuhambisa izixhobo ezinzima, ii-winches, iingcango ezityibilikayo, izixhobo zokucoca isichumisi, oomatshini bokupakisha, abaxube bekhonkrithi, iindlela zokwenza crane, abagawuli bokugaya, oomatshini bokugoba, iimpompo zegiya .
C -Imixers yezixhobo ezinzima, isikere, oomatshini bokushicilela, ii-centrifuges, ukujikeleza okuxhasayo, ii-winches kunye neelifti zezinto ezinzima, ukugaya i-lathes, amatye okusila, iibhetshi zebhakethi, oomatshini bokugrumba, oomatshini bokugaya isando, oomatshini bokushicilela be-cam, oomatshini bokugoqa, ii-turntable, imiphanda yokuwa, i vibrators, abatyakatyi.
Ukuchaneka okuphezulu iiyunithi zentsimbi:
I-MESH DATA kunye nezikhundla zokunyuka kunye nokusebenza
Inombolo yomnxeba: 0086-571-88220652 / 53 Ifeksi: 0086-571-88220651 I-imeyile: [imeyile ikhuselwe]
Ilungelo lokushicilela ngo-2003 HEPT Onke amalungelo agciniwe.
Umenzi we: ibhokisi yebhokisi yebhokisi yebhokisi yebhokisi ephantsi ,Umenzi we: ibhokisi yebhokisi yebhokisi yebhokisi yebhokisi ephantsi ,isinciphisi esisezantsi sokunciphisa umenzi china umvelisi , I-gearbox i-gearbox encinci china manufacturer, i-china gear angle gear, china gear gear, china worm gear reducer china, china gear worm reducer,isiguquli somoya